रिसोर्ट मार्मिंग्स होटेलहरू सबै पहिलो लाइन समावेश गर्दछ, मस्कोबाट टर्कीमा आराम गर्न यात्रा गर्नुहोस्, मूल्य अपरेटर कोरल यात्राबाट 2021।
1 / H2> को मौसममा लोकप्रिय मार्समरी होटलहरू
Marimeris मंबरेस स्टारमा ताराहरू - PGS होटेलहरू फोर्टेज फ्लिज्ज रिसोर्ट
मार्मिसमा आराम गर्नु भनेको सुन्दर दृश्यहरूको आनन्द लिने, न्यानो समुद्रमा पौडिने ठूलो अवसर हो, टर्की आतिथ्यको सौन्दर्य महसुस गरेर स्थानीय होटलहरूको मूल्यांकन गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई मार्मारिसहरूमा टुरहरू प्रदान गर्दछौं 20221 को मूल्य 2021 मा, धन्यवाद कि छुट्टीको लागि डिजिटब्यान्ड गर्नुहोस्!
हो, यो हो कि यदि तपाईं धेरै पाँच-तारे होटलहरू मध्ये एक छनौट गर्नुभयो भने। उनीहरूसँग धेरै धेरै फाइदाहरू छन्, जुन प्रतिरोध गर्न असम्भव छ। उदाहरणका लागि, तपाईं 99% को एक सम्भावना संग समुद्रको समुद्र तटीय मा शायद प्रत्यक्ष र केवल समुद्र तट मा आराम, तर पनि पानी खेल अध्ययन आनन्द सक्दैन, मोटर र गैर-मोटर दुवै। होटल सेवामा सबै समावेशी वा अल्ट्रा उपलब्ध हुनेछ, जसले तपाईंलाई धेरै सेवाहरू भुक्तान नगर्न अनुमति दिनेछ जुन अन्य होटेलमा भुक्तानी हुनेछ।
के महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्ता स्थानहरूमा त्यस्ता कर्मचारीहरू सामान्यतया बहुचाधिकार हुन्छन्, र यसलाई रूसी बोल्नेछ। होटेलको बारेमा त्यस्ता जानकारी तपाईले हाम्रो ट्राभल एजेन्सीको प्रबन्धकबाट अग्रिम निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ।
निश्चित रूपमा मार्सिसको सर्वश्रेष्ठ होटेलहरूमा। पहिलो रेखा। हामीले क्यासा डे मारिसको रूपमा यस्तो रमाइलो ठाउँ बनाउन सक्दछौं। होटल समुद्री सतहमा अवस्थित छ र एक निजी समुद्र तट, 100 मिटर लामो छ। तपाइँको लागि अतिरिक्त सेवाहरू फिटनेस कोठा र एक सौन्दर्य केन्द्रको साथ प्रदान गरिनेछ, एक पौंडी पोखरी, एक मजाक पोखरी, टर्की स्नान, धेरै रेष्टुरेन्ट र बच्चाहरूको मनोरन्जन। कोठाको वातानुकूलन, नयाँ फर्निचर छ, एक निजी बाथरूम, इन्टरनेट जडान, साथै चिया र कफीले किटहरू बनाउँदै।
Marcaris7स्टारहरूमा सब भन्दा राम्रो होस्टलमा यात्राहरू पहिलो रेखा र ठाडो टर्की रिसोर्टको आनन्द लिनुहोस्! सबै विवरणहरूको लागि, कृपया हाम्रो प्रबन्धकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
pai> Pai> Pai> plahly सबैभन्दा राम्रो गहना नजिकै: pash-स्टार होटलहरु को नजिकै: केहि लोकप्रिय arks स्टार kewent: 4./5 - यात्री स्कोर : 4. /
त्यहाँ छ मार्मरिस पोखरीको साथ पाँच स्टार होटलहरू? मार्समरीहरूमा पौडी खेल्ने पोखरीहरू: - यात्री रेटिंग: 4./5 -
<। के पाँचवटा तारा होटलहरू यहाँ सब भन्दा राम्रो हुन्? मार्मामिसमा शीर्ष पाँच स्टार होटलहरू: 4. / / tage यात्रुहरूको मूल्यांकन: 4. /
Garamiis मा पाँच-स्टार होटलहरू के हुन्? मार्रीस्टमा नि: शुल्क पाँच-स्टार होस्टहरू जीतहरू जिममा पहुँच गर्नुहोस्: / / - - यात्री रेटिंग : 4. /
निजी बालकनीमा पाँच-स्टार होटलहरू के हुन्? मार्समा पाँच स्टार होटलहरू, - यात्री रेटिंग: 4. / - यात्रु रेटिंग: / / - - यात्री रेटिंग: 4./5
gi मार्समारिजले सुन्दर दृश्यहरूको साथ कोठा प्रस्ताव गर्दछ? मार्समरीहरूमा यी पाँच स्टार होटलहरू प्रदान गर्छन् र यात्रीहरू बीच लोकप्रिय छन्: / 4. / - / LI>
Marmeris: पारिवारिक बिदाका लागि कुन पाँच-स्टार होटलहरू मार्समरीमा यी पाँच-स्टार होटलहरू मन पराउँथे: / - -4- यात्री रेटिंग: 3. /
नि: शुल्क बिहानको साथ मार्कर्सको साथमा छ: - ट्राभलर रेटिंग: 4. / -: यात्री रेटिंग : 4./5/5
मा मार्समेलमा पाँच-स्टार होटलहरू नि: शुल्क पार्क दिन्छन्: - यात्रीहरूको मूल्यांकन: / / - - यात्री रेटिंग: 4. / /
< LI> मारमेरीस मा एक पाँच-स्टार होटेलहरू छन्, जसमा स्मा सेवाहरू प्रस्ताव गरिन्छ? मार्समा मारिसमध्ये स्पासरहरू सेवाहरू: - / - - यात्रीहरूको मूल्यांकन: 4. /
आय होटेललाई समुद्रको साथ ठूलो र सुरन्दुयक क्षेत्रको साथ। वेश्या वा कार5मिनेटमा विक्रेता गाउँ। समुद्रमा एक अवसर - पियरीबाट। भिल्लाहरू वा मुख्य भवनमा हेर्नुहोस्। विकसित पूर्वाधार: धेरै पोखरीहरू। राम्रोसँग सुसज्जित खेल मैदान, पानी पहाड, रेस्टुरेन्टहरू, रेस्टुरेन्टहरू, सौना र हम्ममा, रेस्टम, टेनिस अदालत। हामी परिवार र युवा मनोरन्जनका लागि सिफारिस गर्दछौं।
नयाँ होटल, मार्बरिसको केन्द्रबाट टाढाको 2014 मा खोलिएको छैन। विचारशील पूर्वाधारको साथ एक सानो राम्रो-गैलोटेड क्षेत्र, आधुनिक वास्तुकला, राम्रो सेवाले यस होटलमा छुट्टीको राम्रो प्रभावहरू छोड्नेछ।
समुद्री किनारमा आराम गर्दै, समुद्री किनारमा आराम गर्दै, समझदार आकर्षणमा जानुहोस् र उज्यालो नाइट मनोरन्जनको लागि भाग लिनुहोस्।
प्यारा pgs होटेलहरू फोर्टेज ऑप्ट होट होटल (पहिले मार्शल रिजल र एसपीए) एक पाइन वन मा पहिलो तटरमा अवस्थित छ। होटलको भवन होटल मार्केमारिस रिसोर्ट डिजेल रिसोर्ट रिसोक्स Km किलोमिको दूरीमा तपाईं हार्रोन व्चरोल 1 km किलोमिटर टाढा गाउँमा जान सक्नुहुन्छ मरामिसलाई 20 किलोमिटर टाढा छ। डेलामान एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट 110 किलोमिटर टाढा छ।
<< p> यो पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित कर्मचारीहरू, भव्य सेवा, एक रमाईलो एनिमेसन (विशेष गरी राम्रो बच्चा एनिमेसन), एक ठूलो राम्रोसँग राखिएको क्षेत्र र उत्कृष्ट स्थान। यो कोठा मा सरलता र सान्त्वना छैन। होटलसँग नजिकैको सुन्दर समुद्री तट। प्लस, स्टाफले रूसी बोल्छ।
क्लिस्पेरा रेस्टुरेन्ट फोर्टेजजा रेस्टुरेन्टमा निकृष्ट छ, तर वेस्कटर रेस्टुरेन्टहरू वयस्कहरूको लागि मात्र हो। अधिकांश des घडीमा डिनर पर्याप्त टेबुल छैन, तर यो अन्य धेरै होटेलहरूको समस्या हो।
केही पर्यटकहरू भान्छा मनपर्दैन, र जुलाहरू पातलो देखिन सक्छन्। मेनूमा केही समुद्री खाना। धेरै राम्रो कफी छैन।
यदि तपाईंलाई थप जानकारी चाहिएको छ भने फोटोहरू, मूल्य, मूल्यहरू र समीक्षाहरूले PGS होटेल फ्र्याजेन रिसोर्टमा हुन सक्दछ।